Shahaadada - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Sichuan Juneng wuxuu taageersan yahay ruuxa hal-abuurnimada joogtada ah iyo hormarinta Times, wuxuu helay dhammaan noocyada shahaadooyinka, sida SGS, CE, NIOSH MSDS iyo IS09001 Shahaadada, isla mar ahaantaana, waxaan helnay 2 kumbuyuutar hal-abuurnimo wax soo saar, 2016, waxaan sharaf u leenahay helay National "125" abaalmarin horumarineed oo Saynis iyo Teknolojiyad.
Sichuan juneng ma aha oo kaliya bixinta alaabooyin is-summad leh oo tayo sare leh, laakiin sidoo kale waxay sameyn kartaa OEM. Sichuan juneng wuxuu raacayaa istiraatiijiyadda horumarinta qaran ee "The Belt and Road", iyadoo la raacayo tallaabada waddammada "Horumarka gobolka galbeedka ee Shiinaha", Qaadashada tareenka gaarka ah eechchina ee ka socda Chengdu ilaa Yurub. waxaan dhoofineynaa wax soo saarkeena in kabadan 30 nooc. Dhoofinta waxay ka dhigan tahay 80% wadarta guud ee iibka shirkadda, iyo saamiga suuqa gudaha ayaa sidoo kale sii ballaaranaya sannadba sanadka ka dambeeya.
Warbixinta Imtixaanka PFE
Warbixinta Imtixaanka BFE99
N95 Warbixinta Imtixaanka
SGS ffp2 KF 94 Warbixinta Imtixaanka
FARSAMADA MALMAHA MADAXDA MSDS
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda, Maaskaro Ffp3, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka,